The Ab Presents Nepal » रविको मोवाइलबाट अस्मिता र शालिकरामसंग फोनमा कुराकानी नभएको पुष्टी तर….
रविको मोवाइलबाट अस्मिता र शालिकरामसंग फोनमा कुराकानी नभएको पुष्टी तर….
चितवन ५ भदाै-: नेपाली चर्चित पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणको छानबिन गरिरहेको प्रहरीले घ टनाका विषयमा महत्वपूर्ण तथ्य फेला परिसकेकाे छ । पत्रकार शालिकराम पुडाशैनीले आफुले २४ टेलिभिजन छोडिसकेपछि पनि रविको समुहले आफुलाई बारम्बार दवाव दिइरहेको भिडियोमा बताएका थिए ।
प्रहरीले प*क्राउ परेका रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीको कल डिटेल हेर्दा यस्तो देखिएको हो ।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा अस्मिता कार्कीको मोबाइलमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’को प्रसारण संस्था न्युज २४ को ल्याण्डलाइन नम्बरबाट पटक–पटक सम्पर्क भएकाे देखिएकाे बताए । प्रहरीले प*क्राउ परेका रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र रुकु भनिने अस्मिता कार्कीको कल डिटेल हेर्दा यस्तो देखिएको हो ।
अस्मितासंग बढीमा ५ मिनेटसम्म कुराकानी गरेको कल डिटेलवाट देखिएको प्रहरील स्रोतले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा रवि लामिछानेको मोवाइलवाट भने अस्मिता वा शालिकरामसंग प्रत्यक्ष कुराकानी भएको देखिएको छैन ।
पत्रकार शालिकरामले न्युज २४ छोडिसकेको अवस्थामा समेत पटक पटक सम्पर्क भएको देखिएपछि प्रहरीले घटनालाई गम्भिरता पुर्वक लिएको छ । अस्मितासंग बढीमा ५ मिनेटसम्म कुराकानी गरेको कल डिटेलवाट देखिएको प्रहरील स्रोतले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा रवि लामिछानेको मोवाइलवाट भने अस्मिता वा शालिकरामसंग प्रत्यक्ष कुराकानी भएको देखिएको छैन । रविले आफु पनि मोवाइलवाट फोन नगर्ने र अरुको पनि नउठाउने गरेको बताइएको छ । उनले सहयोगी मार्फत् मात्र मान्छेहरुसँग टेलिफोन कुराकानी गर्ने गरेका छन्।
रविले भिडियोका बारेमा साथीहरु मार्फत सुनेको भए पनि प्रत्यक्ष नहेरेको बताएका छन् । ‘घटनाकी केन्द्रीय पात्र भनिएकी रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई म चिन्दिनँ। उनीसँग कुनै किसिमले सम्पर्क पनि गरेको छैन’, उनको बयानका क्रममा भनेका छन् ।
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएपछि रविले सरकारी वकिल समक्ष दिएको बयानमा उनलाई लगाइएको सबै आ*रोप इन्कार गरेका छन् । उनले पुडासैनीको देह*त्यागमा आफ्नो संलग्नता, योजना तथा सम्पर्क केही नरहेको उनको दाबी छ । उनले पुडाशैनीले रेकर्ड गरेको भनिएको भिडियो पनि आफुले हेर्न नपाएको बताएका छन् ।
पुडासैनी मृ*त्यु घटनाको अनुसन्धानकै लागि भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० का प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मी चितवनमै छन्
रवि लामिछाने प*क्राउ परिसकेपछि पुडाशैनीको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । रविले भिडियोका बारेमा साथीहरु मार्फत सुनेको भए पनि प्रत्यक्ष नहेरेको बताएका छन् । ‘घटनाकी केन्द्रीय पात्र भनिएकी रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई म चिन्दिनँ। उनीसँग कुनै किसिमले सम्पर्क पनि गरेको छैन’, उनको बयानका क्रममा भनेका छन् ।
पुडासैनीले मृ*त्युअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा भएको आवाज उनकै भएको फरेन्सिक ल्याब परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको छ। प्रहरीले यसअघि नै उनको मोबाइल सञ्चालन भएयताका सबै डाटा रिकोभर गरिसकेको छ। पुडासैनी मृ*त्यु घटनाको अनुसन्धानकै लागि भनेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० का प्रवक्ता एसपी दीपक रेग्मी चितवनमै छन् ।